5 Words vs. 5 been — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Sida aan ka soo jawaabin fariin ku xidhan tahay qofka waa ka. Aan idin siiyo tusaale. Oo haddii shisheeye kor u socda ayaa ii on wadada oo sheegay in, "Ha ii amaahan furaha gaariga dhabta deg deg ah. Waxaan rabaa in aan xoogaa lacag ah oo ka soo baxa sanduuqa gashi aad,"Malaha waxaan eegi doono isaga sida uu waali oo soco off. Laakiin haddii xaaskeyga ahaayeen in baa i soo gaadhay iyo wax la mid ah, Waxaan iyada siin lahaa furayaasha oo aan fikir labaad. Waxaan Dhegaystaan ​​waxna ka qabtaan si ka duwan iyadoo ku xiran yaa la hadlaya.
Sidee ku saabsan hal-abuurey more. Haddii mid ka mid ah saaxiibadayda wanaagsan ku adkeystay in aan soo gudbiyo si uu awood kaamil ah ka badan noloshayda oo dhan, Waxaan u badan tahay eegi doono isaga sida uu waali iyo tag u hesho saaxiibo cusub qaar ka mid ah. Oo waxay noqon lahayd wanaagsan ii in ay ka jawaabaan hab in. Laakiin waxa haddii Ilaah laftiisa ayaa sheegay in wax aad u la mid ah?
2 Timothy 3:16 ayaa sheegay in, "Qorniin kastaa waa neef ilaahay." Taasi ma aayadda oo dhan, laakiin kuwa shan eray ku filan ku odhan fikiraa ee Meyeydaan. Xaqiiqada ah in erayada Kitaabka waa erayadii Ilaah qudhiisu waa weyn. Oo anigu waxaan u malayn kuwa shan eray, "Qorniin kastaa waa neef ilaahay,"Naga caawiyaan dagaalamaan qaar ka mid ah been ah in aan mararka qaarkood aaminsan yihiin oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah. Waxaan doonayaa in aan eegno shan.
1. Maxaa yeelay, Kitaabka waa Ilaah-ku neefsaday ma ahan: opinion
Qaar badan oo naga mid ah ula dhaqmaan Kitaabka Quduuska ah sida buug ka buuxaan talooyin ama ururinta ah oo maahmaahood;. Waxa ay noqon doontaa wanaagsan in lagu daweeyo Kitaabka Quduuska ah sidan haddii ay ahayd oo kaliya buug ah oo lagasoo xigtay in qof isu soo wada urureen. Waxaan ku dhajisan karo oo muujinaya qaybaha waxaan jeclaan. Laakiin ma ahan.
Ilaah leeyahay amar uu naf kasta oo nool in ka badan oo markii uu ku siinayaa amarrada, ay tahay talo ma dadbaa. Iyagu ma ay tahay fikradaha aan dooran kartaa in ama aan si subscribe to. Ilaah ma laha "fikradahooda." Waxa uu Ilaah. Wax kasta oo uu u maleeyo waa run.
2. Maxaa yeelay, Kitaabka waa Ilaah-ku neefsaday ma ahan: dhacsan
Dad badan ayaa maanta ka hadlo Kitaabka Quduuska ah sida buugga duug ah la dhinacyo jir ah in aan u baahanahay si aad u hesho ee la soo dhaafay. oo wuxuu u wada, waa inta badan weerar iyo xaaladaha qaarkood darana sinaysta. Qaar kale waxay ku odhan, "Waa jir - hesho waxa aad sameyn kartaa in ka, laakiin ha qaadan aad u halis ah. "
runta Ilaah ma dhacayo. Ilaah nin kuwaas oo uu saameeyay goob dhaqanka qaar ka mid ma aha. Ilaah waa weligiis iyo weligiis,. Baybalku waa duq ah oo taasna waxaa lagu qoray dhaqamada kala duwan, laakiin dhan of runta waa sida runta ah ee maanta. Sidaas our shaqo ma aha in ay iska indha, alaabtii in uusan "na ku haboon" ama in uusan u dhigma waxa aan u malaynayaa waa moral. Shaqadeenu waa inaan akhriyin wixii Ilaah wuxuu yidhi, ogaado waxa ay ka dhigan noo, iyo soo gudbiyaan in ay.
3. Maxaa yeelay, Kitaabka waa Ilaah-ku neefsaday ma ahan: Just Information
Qaar ka mid ah oo naga mid ah sida fiqi for sababaha khalad. Waxaan u tag Kitaabka si aan u baran karo, alaabtii oo qoto dheer dareemaan. Marka aad akhrin Kitaabka waxaa ma ahan oo keliya buugga taariikh, ama buug xigmad, ama buug sheekooyin. Waa waxyaalihii, laakiin marnaba kaliya waxyaalihii. Marka aad la fariisto Ereyga, aad la kulmay Ilaah. Marna ha akhriyo erayga Ilaah oo aan xaqiiqda ah in safka hore ee maskaxdaada. Ilaah waa hadlaya. Dhegayso.
4. Maxaa yeelay, Kitaabka waa Ilaah-ku neefsaday ma ahan: caajiso
Waxaan qabaa, malaha waa aragti dembi badan in oo dhan oo naga mid ah ayaa dambi ah barta qaar ka mid ah. Waxaan ma doonayo in aan akhriyo Kitaabka Quduuska ah sababtoo ah ma uusan runtii noo qabsoomayn. Waxa aanu sii aannu ogaanno. Kaliya waxaan ku odhan doonaa mid wax: Sidee ayaa laga yaabaa waxaa lagu caajiso in Ilaah arki!? Waa caddayn hari our dhadhan dembi leh. Waxa ay muujinaysaa in aan dhadhan waayo, waxyaalihii qaldan oo dhan.
Aan ka toobad keenin in, trust Masiix, oo ay ka faa'idaystaan ​​mudnaan ah in uu la kulmo Ilaah.
5. Maxaa yeelay, Kitaabka waa Ilaah-ku neefsaday ma ahan: Dadka isagoo tabar Yar
Ereyga Ilaah waa xoog badan. Waxaa la Kalimadiisii ​​uu ahaa in uu abuuray Caalamka oo dhan. Waxa uu sheegay in, “Yaanu,” oo waxaa jiray. Markii Ciise, Ilaah Wiilka, in Earth yimid xoogga Kalimadiisii ​​uu ahaa soo bandhigay buuxa. Markii uu ka hadlay jinniyada cowered, dabaysha iyo hirarka gurteen, cudurada cararay, iyo dadka dhintay dib u yimaadeen inay nolol. Ereyga Ilaah waa la maleeyn karin awood.
Waa by erayga Ilaah in kasta oo inaga mid ah la badbaadin karaa. Ilaah wuxuu isticmaalaa erayga xooggiisa in ay jebiyaan qalbiyadeenna qabow dhintay oo iyaga u gacangeli indhaha inuu Ciise arko, kuwaas oo loo sara kiciyey kuwii dhintay ka soo by erayga Ilaah. Waxaa kale oo ay Word isla waxakan Ilaah sii wadaan in ay ugu muujiyo naftiisa noo.
Buuga fadhiya Sucuudiga on your shelf waa erayga Ilaah Qaadirka. Waa quduuska ah, xurmada, run, iyo maleeyn karin awood.
Markii Ilaah naftiisa ku hadla waa in wax laga beddelo habka aanu dhagaysan.
KdMeads • September 5, 2013 at 11:32 waxaan ahay • Reply
Awesome! Waxaan dheeraad ah u baahan!
Latisha • September 5, 2013 at 11:34 waxaan ahay • Reply
Waxaan si dhab ah riyaaqay this reading waxaa iga caawiyay ka badan aad u ogaato. Thanks❤
Clarence • September 5, 2013 at 11:38 waxaan ahay • Reply
post Tani waxa ay ahayd mid aad u taabasho. Iga dhigay ogaadaan qiimaha erayga Ilaah iyo sida loo codsado in aan nolol maalmeedka. Ka dhig shaqo wanaagsan wuxuuna kooxda kaalinta on Trip noloshaada samaynaya!!!
Tee • September 5, 2013 at 11:44 waxaan ahay • Reply
OmG! dhibic labaad waa dhab ahaan waxa Rabbiga adeegaysay igu saabsan galabta.. Ilaah lagu muujiyo dheeraad ah ammaana! Tani waa post weyn Rabbiga magiciisa waxaa laga yaabaa in lagu ammaano..
Rosalinda • September 5, 2013 at 11:53 waxaan ahay • Reply
Tani waa waxa ugu cabdo Waxaan akhriyay maalintii oo dhan. Thnx isagoo nuurka u ah ee dunida oo ammaanay ahu!!
description kaamil ah erayga Ilaah iyo sida ay khusaysaa nolosheena.
Suugada Boom! Waan ku Bro badan jeclaan! Aad ku habboon oo aad u cad u sheegay in… The “All of Kitaabka”
kachule Tony • September 5, 2013 at 2:08 pm • Reply
Waxaan leeyahay aad u hesho dareen badan waxa u ku sheegay,in Ilaah ammaanu ha u ahaato,aan isagu mar dambe u sheeg!!
Xusuuso: 5 Words vs 5 been …by Trip Lee | Bro. Jerome
Gacaliye Trip Lee
erayada kuwa run ahaantii ila hadlay, maxaa yeelay, kaliya horaantii on baan fiiriyey at my bible, “waxaa jirka” iyo “Ma inaan dhab ahaan u akhri?”.runtii blog Tani sida aan arkaan bible.God Waxaad ammaan iyo Waxaad ku mahadsan bedelay
cabsado! iga dhab ahaantii u duceeyey. mahad doin waxa u samayn :)
Taasi waa run oo ay ku dhufatey barta!! Qof kasta wuxuu u baahan yahay fariimaha in tallaabooyinka ay suulasha.
Sida 19 sanno jir ah nin, Waxaan dareemayaa sida u la qarnigan la xidhiidhaan.
Just doonayay in la yidhaahdo, Waan ka mahdinayaa waxa ur samaynaya.. iyo ur kaliya nin aan dhegaysan kartaa wacdiya for 1hr aan bilig! Waxaan maqli doonayaa inaan ka badan wacdiyada ur up on this site plz!
Waan ku maqlayaa.
Aamiin! Sidaas True waxaan gabi ahaanba jeclaataa blog this! aad baad u mahadsan tahay, waayo, aragti iyo ereyo dhiirin ah! :-)
Blog Tani kaliya lagu hayaa sii fiicnaanayaa.
My Bible ma aha on shelf ah waxaan ahay ee Ezekiel 24. Waxaan ahay reading toos ah ku tuuray. Laakiin marna aan akhriyay wax sidan oo kale….Habka ugu Yeruusaalem wuxuu ku qeexayaa waa waalan yahay. Waxaan ku dhowaad dareemi kartaa xanuun Ilaah tuuray cutubkan sida uu ku sharaxayaa Qiyaame this.
Limon • December 9, 2014 at 11:08 waxaan ahay • Reply
Wow waa anna waan ku qiran aad samayn qaar ka mid ah dhibcood aad u treanhnct.
ReneeB • September 6, 2013 at 9:00 waxaan ahay • Reply
Really?! Tani waa mid laga cabsado!!! Ha abid kula tahay ma wax ku filan ama leh ku filan noloshaada.. Just soo xusuusta wixii wuxuu idinka soo bixiyey oo aad haddiiba arki doonaa waxa uu sameeyo, iyo samaynayso.. Waxa uu aad u isticmaalaya si xoog leh!!! Waad ku mahadsan tahay wax kasta oo aad samayn, waxay siinaysaa rajo!!!!!!
Ha WORD kasta, waxaa loo isticmaali iyo fikirayay dul dhiirranaan iyo rabitaankooda,
Haddaba sidaas daraaddeed ayaa wiilnimadaasi iyo xoog loo naga shaaca ka qaaday karo by Ruuxa Quduuska ah oo Ciise Masiix Name.
Thanks waayo, erayadanu xigmad la wadaago! i xusuusinayaa in ballammada kaliya uma dareemaan-hadal wanaagsan ama u Waxyoon iyo dhiiri xigashooyin… ay sidaas tahay sii badan…ay tahay runta Ilaah ee nolosheena. #ILoveIt!
Rabbiga ammaana, waayo, xikmaddiisa aan la koobi karayn iyo jecel Muujinin marayo Ereygiisa quduuska. Oo ku mahadsantahay inaad dareen Ruuxiisa si ay u. Waxaan rajaynayaa in aan farshaxanka gaari doonaan dadka hal maalin jidka idinkaa sameeyo! wacdigii sii, Bro!
Xusuuso: Countdown- Day 9: Balanqaadyo uu Real yihiin! | ollilovely
Waxaan ku mahad naqayaa ilaah for lagu subkado waxa uu leeyahay meelo ku saabsan nolosha o jeclaaday blog iyo sugaynaa in ka badan reading. Ilaah waxa uu dhab ahaantii u duceeyey xigmad aad hantidaan
Trip, in uu yahay wax heshiis oo dhan waxaan u malaynayaa in aan la gaar ahaan marka dabka hoos u dhinto. Waxaan arki qaar ka mid ah in arki buugaag ay qoreen qoraayo kale siinayo aragtiyada Qorniinka laakiin iloobin in Kitaabka Quduuska ah waa Ilaah ku neefsaday. Had iyo jeer qaado Kitaabka Quduuska ah sida maamulka sare!
Xusuuso: Saturday qaylo dheceen: Kansas City, Pine Bluff, & Links Wasaaradda | H.B. Charles Jr..
Beautiful. Ilaah’ erayga doorsoomaynin. Waxaa maanta la mid ah sida ay ahayd kun oo sano ka hor iyo weli noqon doonaa kun dhabta ah ee sano ee hadda ka. Man jecel yahay inuu bedelo, isbeddel, khalad u tarjumid, iyo waxa ay u maareeyaan ujeedadiisa. ku akhri, Akhriya, waxay ku nool yihiin. Yeeshid erayga. Identityfulfilled.com
deeqsinada • September 9, 2013 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Waa maxay sababta Kitaabka Quduuska ah iyo ma Quraanka / Bhagavad Gita / Talmud / iwm.?
Shelby • September 10, 2013 at 1:54 waxaan ahay • Reply
Anigu ma sharxi karo sida aan wax badan this loo baahan yahay, iyo sida ku mahadisaan waxaan am in aad dhegaystay codkii Ilaah sida fariin this ahaa ku qoran. Mahadsanid!
David Williams • September 11, 2013 at 1:15 waxaan ahay • Reply
Walker • September 11, 2013 at 10:55 waxaan ahay • Reply
“tastebuds dembi leh,” Waxaan jeclahay in. Waa si run ah. Waxaan u imid inaan Word iyo dayrta hurda. Taasi waa mid laga cabsado. Waxaan u baahanahay in ay toobad keenaan oo Ilaah weydiin indhaha u fur oo ii dhergin, sida ugu sabuur. Ka dhig qoraal iyo adeegi Trip, waxaa alaabtii wanaagsan. Aad u dhiiri oo dhulka ku soo degay.
Chelsea • September 26, 2013 at 8:56 waxaan ahay • Reply
WOW. mid kasta oo ka mid ah dhibcood kuwa waa xaq on oo uu i siiyay yididiilo cusub oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah. Waad ku mahadsan tahay runta Ilaah oo ka hadlaya. Waxaa toughing nolosha dad badan oo.
Tani waa waxa loo baahan yahay i ,
Xusuuso: 5 fikradaha (been ah) on erayga Ilaah | Waxaan ka baran Kitaabka Quduuska ah